Ukuzikhulula - ForexMT4Indicators.com
Forex Ukuhweba, njengazo zonke ukutshalwa kwezimali zokucabangela iyingozi.
Ngokuzibheka iyiphi impahla noma usebenzisa ulwazi ngaphakathi kule sayithi, Uyavuma yini ukuthi kuyinto impahla jikelele yemfundo futhi kayiyikumyekela noma ubani obangela ukulahlekelwa noma umonakalo owabangelwa okuqukethwe enikeziwe lapha "ForexMT4Indicators.com" noma yimuphi kwabasebenzi bayo noma abasebenzi. Futures, ongakhetha futhi indawo lwemali ukuhweba kunemivuzo engaba amakhulu kodwa futhi ezinkulu ingozi engaba. Kufanele siqaphele izingozi kanye azimisele ukwamukela kubo ukuze ukutshala ikusasa, ongakhetha noma izimakethe lwemali. Musa ukudayisa imali awukwazi ukukhokhela ukulahlekelwa. Le webhusayithi akusona ukuncenga noma ukunikezwa ukuthenga / ethengisa ikusasa, ongakhetha noma zezimali. Ayikho ukumelwa enziwa ukuthi iyiphi i-akhawunti ngeke noma kungenzeka ukufezekisa inzuzo noma ukulahlekelwa ezifana nalezo kuxoxwa kule webhusayithi noma kunoma yiziphi izinto zalo. Ukusebenza kwanoma iyiphi uhlelo zokuhweba noma indlela esidlule akuyona ngempela eyabonisa Imiphumela esizayo.
Kubalulekile kakhulu ukuthi wazise ngokwakho ngokucophelela mayelana namathuba kanye nobungozi ngaphambi yimuphi izinqumo zokutshala izimali zenziwa.
Lokhu kuhlanganisa hhayi kuphela izici zezimali kodwa labo futhi zomthetho kazwelonke.
Sicela uqaphele ukuthi ukusebenza komlando uhlelo lwemali zokuhweba noma Forex isu ukuhweba futhi Forex izinkomba akukwazi eyabonisa Imiphumela esizayo.
Phawula ukuthi ezinye zezindlela forex Ukuhweba izinhlelo kule webhusayithi kungenzeka eyahlanganiswa kusukela ucwaningo kwamanye amasayithi mahhala ngezinjongo zokufundisa kuphela futhi kufanele wenze inkuthalo yakho ngenxa ukuhlola kwabo futhi uwasebenzise ngentando yakho.
Iqiniso ukuthi ahlelwe kule sayithi akusho zonke forex uhlelo Ukuhweba kulapho ezosebenza. Kuningi lokwehlukile kuzoba nomthelela ukusebenza uhlelo zokuhweba.
U.S. Kudingeka Uhulumeni Disclaimer – Lezimpahla Futures Ukuhweba Commission Futures futhi Izinketho ukuhweba has imivuzo ezinkulu ezingaba, kodwa izingozi futhi ezinkulu ezingaba. Kufanele siqaphele izingozi kanye azimisele ukwamukela kubo ukuze ukutshala ikusasa nezinketho izimakethe. Musa ukudayisa imali awukwazi ukukhokhela ukulahlekelwa. Lona akuwona ukuncenga noma isiphakamiso Thenga / Thengisa ikusasa noma ongakhetha. Ayikho ukumelwa enziwa ukuthi iyiphi i-akhawunti ngeke noma kungenzeka ukufezekisa inzuzo noma ukulahlekelwa ezifana nalezo okusekhasini le webhusayithi. Ukusebenza kwanoma iyiphi uhlelo zokuhweba noma indlela esidlule akuyona ngempela eyabonisa Imiphumela esizayo.
CFTC UMTHETHO 4.41
Esicabanga ukuthi kungaqhamuka NOMA eyenziwe IMIPHUMELA UKUSEBENZA sinokulinganiselwa EZITHIZE. Ngokungafani ACTUAL UKUSEBENZA IREKHODI, IMIPHUMELA eyenziwe ungameli UKUHWEBA ACTUAL. OKHUNYE, KUSUKELA abathengisa ANGIZANGE sikhishwe, IMIPHUMELA KUNGENZEKA UNENKINGA NGAPHANSI-OR-PHEZU kwavuzwa THE UMTHELELA, UMA YILUPHI, OF EZITHIZE MARKET IZICI, Ezifana UKUNGABI zezimali. Eyenziwe UKUHWEBA NEZINHLELO ngokuvamile OKHUNYE NGOKUKHONJELWA IQINISO UKUTHI ziklanyelwe WITH THE banokuhlangenwe nakho. CHA Imibono kumenyezelwa ukuthi YILUPHI ACCOUNT INTANDO NOMA IS cishe Ukufinyelela inzuzo noma ukulahlekelwa ezifana nalezo SHOWN.
INGOZIYOKUDUNWA UKULAHLEKELWA IN UKUHWEBA zokushintsha zangaphandle (Forex) Kungaba ezinkulu. Ngakho-ke, KAHLE CABANGA KUNGABA UKUHWEBA ONGENZEKA kufanelekile KINI UKUKHANYA ukubhekana nesimo sakho ngempumelelo YEZIMALI. NGEZINGA HIGH asizakale okuvamise itholakala IN Forex Ukuhweba ezingenza kube budisi kanye ne KUWE. Ukusetshenziswa asizakale kungaholela LOSSES OKUKHULU kanye uzuza.
Umthombo CFTC Rule 4.41: http://www.cftc.gov
Le webhusayithi, ngezikhathi ezithile kungase ukukhangisa kungase kudingeke izikhangiso othomathikhi emakhasini ayo mayelana zokugembula kanye nokubheja. Emazweni amaningi, kungekho emthethweni ngoba noma ubani ngaphansi 18 ubudala ukugembula noma ukubheja. Le webhusayithi alikhuthazi ubani ongaphansi kweminyaka engu umkhawulo kwezomthetho ebekwa noma izwe noma yomthetho ungene ngaphansi ukugembula noma ukubheja.
www.forexmt4indicators.com ngeke alandise nanoma ikuphi ukulahleka nihlupheka. Konke okusetshenziswayo ekulesi iwebhusayithi www.forexmt4indicators.com kuyinto nenhloso zokufundisa kuphela futhi akufanele kuthathwe njengoba iseluleko ngokutshalwa kwezimali.